ဤစာမျက်နှာသည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်း၏ နိုင်ငံများစာရင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်စာရင်းအင်းသုံးပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လ ၂၇ ရက် စတင်ထုတ်ဝေသည်။
၀.၉၅၀ နှင့် အထက်
ထိုအစီရင်ခံစာသည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ(၁၉၂ နိုင်ငံအတွင်းမှ) ၁၇၅ နိုင်ငံနှင့်အတူ (တရုတ်ပြည်၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ဟောင်ကောင် နှင့် ပါလက်စတိုင်း အုပ်ချုပ်ရာ နယ်မြေများပါဝင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၁၇ နိုင်ငံမှာ အချက်အလက် မရှိသောကြောင့် စာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့ပေ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဒေသများနှင့် နိုင်ငံ အစုအဝေးတို့ ၏ ပျမ်းမျှ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး ညွှန်းကိန်းကိုလည်း နှိုင်းယှဉ်ရန် အတွက် ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။
လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းသည် တကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြသော လူတို့၏ သက်တမ်း၊ စာတတ်မြောက်မှု၊ ပညာရေး၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသောကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘဝ အရည်အသွေး မည်မျှ ကောင်းမွန်သည်ကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်တို့၏ အခွင့်အရေးကို တိုင်းတာ နိုင်ရန် စံနှုန်း ဖြစ်သည်။ ထိုစံနှုန်းကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတစ်ခုသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ကျနေသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည် စသည်တို့ကို သိသာနိုင်ပြီး စီးပွားရေး မူဝါဒများမှ ဘဝ အရည်အသွေးကို မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ထိုညွှန်းကိန်းကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန် စီးပွားရေး ပညာရှင် မာဘတ် အူလ် ဟတ် နှင့် အိန္ဒိယ စီးပွားရေးပညာရှင် အမာတရာ ဆန် တို့က စတင်ထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံများ HDI ပေါ်မူတည်ပြီး သုံး မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - အမြင့်၊ အလယ်နှင့် အနိမ့် လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး။
▲ = တက်
▬ = ငြိမ်
▼ = လျော့
(၂၀၀၇ ခုနှစ် ထုတ်ဝေ)
၂၀၀၅ စာရင်းအင်း (၂၀၀၇ ခုနှစ် ထုတ်ဝေ)
(၂၀၀၄ ခုနှစ် တုတ်ဝေစာရင်းယှဉ်လျင်)
(၂၀၀၆ ခုနှစ် ထုတ်ဝေ)
၁ ▲ (၂) အိုက်စလန် ▲ ၀.၉၆၈
၂ ▼ (၁) နော်ဝေ ▲ ၀.၉၆၈
၃ ▬ (၀) ဩစတြေးလျ ▲ ၀.၉၆၂
၄ ▲ (၂) ကနေဒါ ▲ ၀.၉၆၁
၅ ▼ (၁) အိုင်ယာလန် ▲ ၀.၉၅၉
၆ ▼ (၁) ဆွီဒင် ▲ ၀.၉၅၆
၇ ▲ (၂) ဆွစ်ဇာလန် ▲ ၀.၉၅၅
၈ ▼ (၁) ဂျပန် ▲ ၀.၉၅၃
၉ ▲ (၁) နယ်သာလန် ▲ ၀.၉၅၃
၁၀ ▲ (၆) ပြင်သစ် ▲ ၀.၉၅၂
၁၁ ▬ (၀) ဖင်လန် ▲ ၀.၈၈၂
၁၂ ▼ (၄) အမေရိကန် ▲ ၀.၉၅၁
၁၃ ▲ (၆) စပိန် ▲ ၀.၉၄၉
၁၄ ▲ (၁) ဒိန်းမတ် ▲ ၀.၉၄၉
၁၅ ▼ (၁) ဩစတြီးယား ▲ ၀.၉၄၈
၁၆ ▲ (၂) ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ▲ ၀.၉၄၆
၁၇ ▼ (၄) ဘယ်လ်ဂျီယမ် ▲ ၀.၉၄၆
၁၈ ▼ (၆) လူဇင်ဘတ် ▼ ၀.၉၄၄
၁၉ ▲ (၁) နယူးဇီလန် ▲ ၀.၉၄၃
၂၀ ▼ (၃) အီတလီ ▲ ၀.၉၄၁
၂၁ ▲ (၁) ဟောင်ကောင် ▲ ၀.၉၃၇
၂၂ ▼ (၁) ဂျာမနီ ▲ ၀.၉၃၅
၂၃ ▬ (၀) အစ္စရေး ▲ ၀.၉၃၂
၂၄ ▬ (၀) ဂရိ ▲ ၀.၉၂၆
၂၅ ▬ (၀) စင်ကာပူ ▲ ၀.၉၂၂
၂၆ ▬ (၀) တောင်ကိုရီးယား ▲ ၀.၉၂၁
၂၇ ▬ (၀) ဆလိုဗေးနီးယား ▲ ၀.၉၁၇
၂၈ ▲ (၁) ဆိုက်ပရပ်စ် ▬ ၀.၉၀၃
၂၉ ▼ (၁) ပေါ်တူဂီ ▼ ၀.၈၉၇
၃၀ ▲ (၄) ဘရူနိုင်း ▲ ၀.၈၉၄
၃၁ ▬ (၀) ဘာဘေးဒိုးစ် ▲ ၀.၈၉၂
၃၂ ▼ (၂) ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ▲ ၀.၈၉၁
၃၃ ▬ (၀) ကူဝိတ် ▲ ၀.၈၉၁
၃၄ ▼ (၂) မော်လတာ ▲ ၀.၈၇၈
၃၅ ▲ (၁၁) ကာတာ ▲ ၀.၈၇၅
၃၆ ▼ (၁) ဟန်ဂေရီ ▲ ၀.၈၇၄
၃၇ ▬ (၀) ပိုလန် ▲ ၀.၈၇၀
၃၈ ▼ (၂) အာဂျင်တီးနား ▲ ၀.၈၆၉
၃၉ ▲ (၁၀) အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ▲ ၀.၈၆၈
၄၀ ▼ (၂) ချီလီ ▲ ၀.၈၆၇
၄၁ ▼ (၂) ဘာရိန်း ▲ ၀.၈၆၆
၄၂ ▬ (၀) ဆလိုဗက်ကီးယား ▲ ၀.၈၆၃
၄၃ ▼ (၂) လစ်သူယေးနီးယား ▲ ၀.၈၆၂
၄၄ ▼ (၄) အက်စတိုးနီးယား ▲ ၀.၈၆၀
၄၅ ▬ (၀) လတ်ဗီယာ ▲ ၀.၈၅၅
၄၆ ▼ (၃) ဥရုဂွေး ▲ ၀.၈၅၂
၄၇ ▼ (၃) ခရိုအေးရှား ▲ ၀.၈၅၀
၄၈ ▬ (၀) ကော့စတာရီကာ ▲ ၀.၈၄၆
၄၉ ▲ (၃) ဘဟားမား ▲ ၀.၈၄၅
၅၀ ▼ (၃) ဆေးရှဲ ▲ ၀.၈၄၃
၅၁ ▼ (၁) ကျူးဘား ▲ ၀.၈၃၈
၅၂ ▲ (၁) မက္ကဆီကို ▲ ၀.၈၂၉
၅၃ ▲ (၁) ဘူဂေးရီးယား ▲ ၀.၈၂၄
၅၄ ▼ (၃) စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် ▼ ၀.၈၂၁
၅၅ ▬ (၀) တုံဂါနိုင်ငံ ▲ ၀.၈၁၉
၅၆ ▲ (၈) လစ်ဗျား ▲ ၀.၈၁၈
၅၇ ▲ (၂) အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ ▲ ၀.၈၁၅
၅၈ ▼ (၂) အိုမန် ▲ ၀.၈၁၄
၅၉ ▼ (၂) ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို ▲ ၀.၈၁၄
၆၀ ▬ (၀) ရိုမေးနီးယား ▲ ၀.၈၁၃
၆၁ ▲ (၁၅) ဆော်ဒီအာရေဗျ ▲ ၀.၈၁၂
၆၂ ▼ (၄) ပနားမား ▲ ၀.၈၁၂
၆၃ ▼ (၂) မလေးရှား ▲ ၀.၈၁၁
၆၄ ▲ (၃) ဘီလာရုဇ် ▲ ၀.၈၀၄
၆၅ ▼ (၂) မောရစ်ရှ ▲ ၀.၈၀၄
၆၆ ▼ (၄) ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ▲ ၀.၈၀၃
၆၇ ▼ (၂) ရုရှား ▲ ၀.၈၀၂
၆၈ ▲ (၅) အယ်လ်ဘေးနီးယား ▲ ၀.၈၀၁
၆၉ ▼ (၃) မက်စီဒိုးနီးယား ▲ ၀.၈၀၁
၇၀ ▼ (၁) ဘရာဇီး ▲ ၀.၈၀၀
(၂၀၀၄ ခုနှစ် တုတ်ဝေစာရင်း ယှဉ်လျင်)
၇၁ ▼ (၃) ဒိုမီနီကာ ▲ ၀.၇၉၈
၇၂ ▼ (၁) စိန့်လူစီယာ ▲ ၀.၇၉၅
၇၃ ▲ (၆) ကာဇက်စတန် ▲ ၀.၇၉၄
၇၄ ▼ (၂) ဗင်နီဇွဲလား ▲ ၀.၇၉၂
၇၅ ▼ (၅) ကိုလံဘီယာ ▲ ၀.၇၉၁
၇၆ ▲ (၁) ယူကရိန်း ▲ ၀.၇၈၈
၇၇ ▼ (၂) ဆမိုးအား ▲ ၀.၇၈၅
၇၈ ▼ (၄) ထိုင်း ▼ ၀.၇၈၁
၇၉ ▲ (၁၅) ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ▲ ၀.၇၇၉
၈၀ ▲ (၁၅) ဘီလာရုဇ် ▲ ၀.၇၇၈
၈၁ ▬ (၀) တရုတ် ▲ ၀.၇၇၇
၈၂ ▲ (၃) ဂရီနေဒါ ▲ ၀.၇၇၇
၈၃ ▼ (၃) အာမေးနီးယား ▲ ၀.၇၇၅
၈၄ ▲ (၈) တူရကီ ▲ ၀.၇၇၅
၈၅ ▲ (၄) ဆူရာနမ် ▲ ၀.၇၇၄
၈၆ ▬ (၀) ဂျော်ဒန် ▲ ၀.၇၇၃
၈၇ ▼ (၅) ပီရူး ▲ ၀.၇၇၃
၈၈ ▼ (၁၀) လက်ဘနွန် ▼ ၀.၇၇၂
၈၉ ▼ (၆) အီကွေဒေါ ▲ ၀.၇၇၂
၉၀ ▼ (၆) ဖိလစ်ပိုင် ▲ ၀.၇၇၁
၉၁ ▼ (၄) တူနီးရှား ▲ ၀.၇၆၆
၉၂ ▼ (၂) ဖီဂျီ ▲ ၀.၇၆၂
၉၃ ▼ (၅) စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် ▲ ၀.၇၆၁
၉၄ ▲ (၁) အီရန် ▲ ၀.၇၅၉
၉၅ ▼ (၄) ပါရာဂွေး ▼ ၀.၇၅၅
၉၆ ▲ (၁) ဂျော်ဂျီယာ ▲ ၀.၇၅၄
၉၇ ▲ (၆) ဂီနီ ▲ ၀.၇၅၀
၉၈ ▲ (၁) အဇာဘိုင်ဂျန် ▲ ၀.၇၄၆
၉၉ ▼ (၆) သီရိလင်္ကာ ▼ ၀.၇၄၃
၁၀၀ ▼ (၂) မော်လဒိုက် ▲ ၀.၇၄၁
၁၀၁ ▲ (၃) ဂျမေကာ ▲ ၀.၇၃၆
၁၀၂ ▲ (၄) ကိတ်ဗာဒီ ▲ ၀.၇၃၆
၁၀၃ ▼ (၂) အယ်ဆာဗေဒို ▲ ၀.၇၃၅
၁၀၄ ▼ (၂) အယ်လ်ဂျီးရီးယား ▲ ၀.၇၃၃
၁၀၅ ▲ (၄) ဗီယက်နမ် ▲ ၀.၇၃၃
၁၀၆ ▼ (၆) ပါလက်စတိုင်း ▼ ၀.၇၃၁
၁၀၇ ▲ (၁) အင်ဒိုနီးရှား ▲ ၀.၇၂၈
၁၀၈ ▼ (၁) ဆီးရီးယား ▲ ၀.၇၂၄
၁၀၉ ▼ (၄) တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ▼ ၀.၇၁၃
၁၁၀ ▲ (၂) နီကာရာဂွါ ▲ ၀.၇၁၀
၁၁၁ ▲ (၃) မော်လ်ဒိုဗာ ▲ ၀.၇၀၈
၁၁၂ ▼ (၁) အီဂျစ် ▲ ၀.၇၀၈
၁၁၃ ▬ (၀) ဥဇဘက်ကစ္စတန် ▲ ၀.၇၀၂
၁၁၄ ▲ (၂) မွန်ဂိုးလီးယား ▲ ၀.၇၀၀
၁၁၅ ▲ (၂) ဟွန်ဒူးရပ်စ် ▲ ၀.၇၀၀
၁၁၆ ▼ (၆) ကာဂျစ္စတန် ▼ ၀.၆၉၆
၁၁၇ ▼ (၂) ဘိုလီးဗီးယား ▲ ၀.၆၉၅
၁၁၈ ▬ (၀) ဂွါတီမာလာ ▲ ၀.၆၈၉
၁၁၉ ▲ (၅) ဂါဘွန် ▲ ၀.၆၇၇
၁၂၀ ▼ (၁) ဗနွားတူနိုင်ငံ ▲ ၀.၆၇၄
၁၂၁ ▬ (၀) တောင်အာဖရိက ▲ ၀.၆၇၄
၁၂၂ ▬ (၀) တာဂျစ်ကစ္စတန် ▲ ၀.၆၇၃
၁၂၃ ▲ (၄) ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ ▲ ၀.၆၅၄
၁၂၄ ▲ (၇) ဘော့ဆွာနာ ▲ ၀.၆၅၄
၁၂၅ ▬ (၀) နမီးဘီးယား ▲ ၀.၆၅၀
၁၂၆ ▼ (၃) မော်ရိုကို ▲ ၀.၆၄၆
၁၂၇ ▼ (၇) အီကွေတာဂီနီ ▼ ၀.၆၄၂
၁၂၈ ▼ (၂) အိန္ဒိယ ▲ ၀.၆၁၉
၁၂၉ ▼ (၁) ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ▲ ၀.၆၀၂
၁၃၀ ▲ (၃) လာအို ▲ ၀.၆၀၁
၁၃၁ ▼ (၂) ကမ္ဘောဒီးယား ▲ ၀.၅၉၈
၁၃၂ ▼ (၂) မြန်မာ ▲ ၀.၅၈၃
၁၃၃ ▲ (၂) ဘူတန် ▲ ၀.၅၇၉
၁၃၄ ▼ (၂) ကိုမိုရို ▲ ၀.၅၆၁
၁၃၅ ▲ (၁) ဂါနာ ▲ ၀.၅၅၃
၁၃၆ ▼ (၂) ပါကစ္စတန် ▲ ၀.၅၅၁
၁၃၇ ▲ (၁၆) မော်ရီတေးနီးယား ▲ ၀.၅၅၀
၁၃၈ ▲ (၁၁) လီဆိုသို ▲ ၀.၅၄၉
၁၃၉ ▲ (၁) ကွန်ဂို ▲ ၀.၅၄၈
၁၄၀ ▼ (၃) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ▲ ၀.၅၄၇
၁၄၁ ▲ (၅) အဲ့စ်ဝါတီးနီ ▲ ၀.၅၄၇
၁၄၂ ▼ (၄) နီပေါ ▲ ၀.၅၃၄
၁၄၃ ▬ (၀) မဒါဂတ်စကား ▲ ၀.၅၃၃
၁၄၄ ▬ (၀) ကင်မရွန်း ▲ ၀.၅၃၂
၁၄၅ ▼ (၆) ပါပူအာ နယူးဂီနီ ▲ ၀.၅၃၀
၁၄၆ ▲ (၈) ဟေတီ ▲ ၀.၅၂၉
၁၄၇ ▼ (၆) ဆူဒန် ▲ ၀.၅၂၆
၁၄၈ ▲ (၄) ကင်ညာ ▲ ၀.၅၂၁
၁၄၉ ▼ (၁) ဂျီဘူတီ ▲ ၀.၅၁၆
၁၅၀ ▼ (၈) အရှေ့တီမော ▲ ၀.၅၁၄
၁၅၁ ▬ (၀) ဇင်ဘာဘွေ ▲ ၀.၅၁၃
၁၅၂ ▼ (၅) တိုဂို ▲ ၀.၅၁၂
၁၅၃ ▼ (၃) ယီမင် ▲ ၀.၅၀၈
၁၅၄ ▼ (၉) ယူဂန်းဒါး ▲ ၀.၅၀၅
၁၅၅ ▬ (၀) ဂမ်ဘီယာ ▲ ၀.၅၀၂
၁၅၆ ▬ (၀) ဆီနီဂေါ ▲ ၀.၄၉၉
၁၅၇ ▬ (၀) အီရီထရီးယား ▲ ၀.၄၈၃
၁၅၈ ▲ (၁) နိုင်ဂျီးရီးယား ▲ ၀.၄၇၀
၁၅၉ ▲ (၃) တန်ဇေးနီးယား ▲ ၀.၄၆၇
၁၆၀ ▬ (၀) ဂီနီ ▲ ၀.၄၅၆
၁၆၁ ▼ (၃) ရဝမ်ဒါ ▲ ၀.၄၅၂
၁၆၂ ▼ (၁) အင်ဂိုလာ ▲ ၀.၄၄၆
၁၆၃ ▬ (၀) ဘီနင် ▲ ၀.၄၃၇
၁၆၄ ▲ (၂) မာလဝီ ▲ ၀.၄၃၇
၁၆၅ ▬ (၀) ဇမ်ဘီယာ ▲ ၀.၄၃၄
၁၆၆ ▼ (၂) အိုင်ဗရီကို့စ် ▲ ၀.၄၃၂
၁၆၇ ▲ (၂) ဘူရွန်ဒီ ▲ ၀.၄၁၃
၁၆၈ ▼ (၁) ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ▲ ၀.၄၁၁
၁၆၉ ▲ (၁) အီသီယိုးပီးယား ▲ ၀.၄၀၆
၁၇၀ ▲ (၁) ချဒ် ▲ ၀.၃၈၈
၁၇၁ ▲ (၁) ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ▲ ၀.၃၈၄
၁၇၂ ▼ (၄) မိုဇမ်ဘစ် ▼ ၀.၃၈၄
၁၇၃ ▲ (၂) မာလီ ▲ ၀.၃၈၀
၁၇၄ ▲ (၃) နိုင်ဂျာ ▲ ၀.၃၇၄
၁၇၅ ▼ (၂) ဂီနီ-ဘီစော ▲ ၀.၃၇၄
၁၇၆ ▼ (၂) ဘာကီးနားဖားဆို ▲ ၀.၃၇၀
၁၇၇ ▼ (၁) ဆီရာလီယွန် ▲ ၀.၃၃၆
ထိုင်ဝမ် ၀.၉၃၂ ၂၀၀၇ (compiled on the basis of 2005 data)
မကာအို ၀.၉၀၉ ၂၀၀၆ (compiled on the basis of 2004 data)
မွန်တီနီဂရိုး ၀.၇၉၉ ၂၀၀၅ (compiled on the basis of 2004 data)
ဆားဘီးယား မရှိ မရှိ
HDI ၁၀ နိုင်ငံ အမြင့်ဆုံး
၂၀၀၅ တွင် (၂၀၀၇ ထုတ်ဝေ)
၂၀၀၅ စာရင်းအင်း (၂၀၀၇ ထုတ်ဝေ)
အပြောင်း ၂၀၀၄ စာရင်းအင်း ယှဉ်လျင် (၂၀၀၆ ထုတ်ဝေ)
၁ ▬ (၀) ကနေဒါ ▲ ၀.၉၆၁
၂ ▬ (၀) အမေရိကန် ▲ ၀.၉၅၁
၃ ▬ (၀) ဘာဘေးဒိုးစ် ▲ ၀.၈၉၂
၄ ▬ (၀) အာဂျင်တီးနား ▲ ၀.၈၆၉
၅ ▬ (၀) ချီလီ ▲ ၀.၈၆၇
၆ ▬ (၀) ဥရုဂွေး ▲ ၀.၈၅၂
၇ ▬ (၀) ကော့စတာရီကာ ▲ ၀.၈၄၆
၈ ▲ (၂) ဘဟားမား ▲ ၀.၈၄၅
၉ ▼ (၁) ကျူးဘား ▲ ၀.၈၃၈
၁၀ ▲ (၁) မက္ကဆီကို ▲ ၀.၈၂၉
HDIs ၁၀ နိုင်ငံ အနိမ့်ဆုံး
၁ ▬ (၀) ဟေတီ ▲ ၀.၅၂၉
၂ ▬ (၀) ဂွါတီမာလာ ▲ ၀.၆၈၉
၃ ▼ (၁) ဘိုလီးဗီးယား ▲ ၀.၆၉၅
၄ ▲ (၁) ဟွန်ဒူးရပ်စ် ▲ ၀.၇၀၀
၅ ▬ (၀) နီကာရာဂွါ ▲ ၀.၇၁၀
၆ ▼ (၂) အယ်ဆာဗေဒို ▲ ၀.၇၃၅
၇ ▲ (၁) ဂျမေကာ ▲ ၀.၇၃၆
၈ ▲ (၁) ဂိုင်ယာနာ ▲ ၀.၇၅၀
၉ ▼ (၂) ပါရာဂွေး ▼ ၀.၇၅၅
၁၀ ▼ (၂) စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် ▲ ၀.၇၆၁
HDIs ၁၀ နိုင်ငံ အမြင့်ဆုံး
၁ ▬ (၀) ဆေးရှဲ ▲ ၀.၈၄၃
၂ ▲ (၁) လစ်ဗျား ▲ ၀.၈၁၈
၃ ▼ (၁) မောရစ်ရှ ▲ ၀.၈၀၄
၄ ▬ (၀) တူနီးရှား ▲ ၀.၇၆၆
၅ ▲ (၁) ကိတ်ဗာဒီ ▲ ၀.၇၃၆
၆ ▼ (၁) အယ်လ်ဂျီးရီးယား ▲ ၀.၇၃၃
၇ ▬ (၀) အီဂျစ် ▲ ၀.၇၀၈
၈ ▲ (၃) ဂါဘွန် ▲ ၀.၆၇၇
၉ ▬ (၀) တောင်အာဖရိက ▲ ၀.၆၇၄
၁၀ ▲ (၃) ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ ▲ ၀.၆၅၄
၁ ▼ (၁) ဆီရာလီယွန် ▲ ၀.၃၃၆
၂ ▼ (၂) ဘာကီးနားဖားဆို ▲ ၀.၃၇၀
၃ ▼ (၂) ဂီနီ-ဘီစော ▲ ၀.၃၇၄
၄ ▲ (၃) နိုင်ဂျာ ▲ ၀.၃၇၄
၅ ▲ (၂) မာလီ ▲ ၀.၃၈၀
၆ ▼ (၄) မိုဇမ်ဘစ် ▼ ၀.၃၈၄
၇ ▲ (၁) ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ▲ ၀.၃၈၄
၈ ▲ (၁) ချဒ် ▲ ၀.၃၈၈
၉ ▲ (၁) အီသီယိုးပီးယား ▲ ၀.၄၀၆
၁၀ ▼ (၁) ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ▲ ၀.၄၁၁
၁ ▬ (၀) ဩစတြေးလျ ▲ ၀.၉၆၂
၂ ▬ (၀) ဂျပန် ▲ ၀.၉၅၃
၃ ▬ (၀) နယူးဇီလန် ▲ ၀.၉၄၃
၄ ▬ (၀) ဟောင်ကောင် ▲ ၀.၉၃၇
၅ ▬ (၀) အစ္စရေး ▲ ၀.၉၃၂
၆ ▬ (၀) စင်ကာပူ ▲ ၀.၉၂၂
၇ ▬ (၀) တောင်ကိုရီးယား ▲ ၀.၉၂၁
၈ ▲ (၁) ဘရူနိုင်း ▲ ၀.၈၉၄
၉ ▼ (၁) ကူဝိတ် ▲ ၀.၈၉၁
၁၀ ▲ (၄) ကာတာ ▲ ၀.၈၇၅
HDI ၁၀ နိုင်ငံ အနိမ့်ဆုံး
၁ ▬ (၀) ယီမင် ▲ ၀.၅၀၈
၂ ▬ (၀) အရှေ့တီမော ▲ ၀.၅၁၄
၃ ▬ (၀) ပါပူအာ နယူးဂီနီ ▲ ၀.၅၃၀
၄ ▬ (၀) နီပေါ ▲ ၀.၅၃၄
၅ ▬ (၀) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ▲ ၀.၅၄၇
၆ ▼ (၁) ပါကစ္စတန် ▲ ၀.၅၅၁
၇ ▲ (၁) ဘူတန် ▲ ၀.၅၇၉
၈ ▼ (၁) မြန်မာ ▲ ၀.၅၈၃
၉ ▼ (၁) ကမ္ဘောဒီးယား ▲ ၀.၅၉၈
၁၀ ▲ (၂) လာအို ▲ ၀.၆၀၁
၁ ▲ (၁) အိုက်စလန် ▲ ၀.၉၆၈
၃ ▬ (၀) အိုင်ယာလန် ▲ ၀.၉၅၉
၄ ▬ (၀) ဆွီဒင် ▲ ၀.၉၅၆
၅ ▬ (၀) ဆွစ်ဇာလန် ▲ ၀.၉၅၅
၆ ▬ (၀) နယ်သာလန် ▲ ၀.၉၅၃
၇ ▲ (၅) ပြင်သစ် ▲ ၀.၉၅၂
၈ ▼ (၁) ဖင်လန် ▲ ၀.၉၅၂
၉ ▲ (၆) စပိန် ▲ ၀.၉၄၉
၁၀ ▲ (၁) ဒိန်းမတ် ▲ ၀.၉၄၉
၁ ▬ (၀) မော်လ်ဒိုဗာ ▲ ၀.၇၀၈
၂ ▬ (၀) ယူကရိန်း ▲ ၀.၇၈၈
၃ ▼ (၂) မက်စီဒိုးနီးယား ▲ ၀.၈၀၁
၄ ▲ (၁) အယ်လ်ဘေးနီးယား ▲ ၀.၈၀၁
၅ ▼ (၂) ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ▲ ၀.၈၀၃
၆ ▲ (၂) ဘီလာရုဇ် ▲ ၀.၈၀၄
၇ ▼ (၁) ရိုမေးနီးယား ▲ ၀.၈၁၃
၈ ▼ (၁) ဘူဂေးရီးယား ▲ ၀.၈၂၄
၉ ▼ (၂) ခရိုအေးရှား ▲ ၀.၈၅၀
၁၀ ▬ (၀) လတ်ဗီယာ ▲ ၀.၈၅၅
၂၀၀၅ (၂၀၀၇ ခုနှစ် ထုတ်ဝေ)
၂၀၀၅ စာရင်းအင်း (published in 2007)
Change compared to 2004 data (published in 2006)
၁ ▬ (0) OECD ▼ ၀.၉၁၆
၂ ▬ (0) အလယ်နှင့် အရှေ့ဥရောပနှင့် CIS ▲ ၀.၈၀၈
၃ ▬ (0) လာတင်အမေရိကနှင့် ကရစ်ဘီယံပင်လယ် ▲ ၀.၈၀၃
၄ ▬ (0) အာရှနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ▲ ၀.၇၇၁
- - ကမ္ဘာ ▲ 0.743
၅ ▬ (0) အာဆီယံ ▲ ၀.၇၄၂
၆ ▬ (0) အာရဗ်တိုင်းပြည်များ ▲ ၀.၆၉၉
၇ ▬ (0) Developing countries ▲ ၀.၆၉၁
၈ ▬ (0) ထောင်အာရှ ▲ ၀.၆၁၁
၉ ▬ (0) Sub-Saharan အာဖရိက ▲ ၀.၄၉၃
၁၀ ▬ (0) Least Developed Countries ▲ ၀.၄၈၈
- - လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင့် ▼ ၀.၈၉၇
- - လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး အလယ် ▼ ၀.၆၉၈
- - လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး အနိမ့် ▲ ၀.၄၃၆
- - ဝင်ငွေအမြင့် ▼ ၀.၉၃၆
- - ဝင်ငွေအလယ် ▲ ၀.၇၇၆
- - ဝင်ငွေအနိမ့် ▲ ၀.၅၇၀
၂၀၀၅ (၂၀၀၇ ထုတ်ဝေ)
- (၁၉၉၇) မိုနာကိုနိုင်ငံ ▬ ၀.၉၄၆
- (၁၉၉၇) လစ်တန်စတိန်း ▬ ၀.၉၄၆
- (၁၉၉၇) အင်ဒိုရာနိုင်ငံ ▬ ၀.၉၄၄
- (၁၉၉၇) ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ ▬ ၀.၉၄၄
- (၁၉၉၈) ပေါ်တိုရီကို ▬ ၀.၉၄၂
- (၁၉၉၈) ဂရင်းလန်း ▬ ၀.၉၂၇
- (၁၉၉၈) ပလောင်း ▬ ၀.၈၆၁
- (၁၉၉၅) မြောက်ကိုရီးယား ▬ ၀.၇၆၆
- (၁၉၉၈) နအူရူးနိုင်ငံ ▬ ၀.၆၆၃
- (၁၉၉၈) တူဗားလူ ▬ ၀.၅၈၃
- (၁၉၉၈) မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ▬ ၀.၅၆၉
- (၁၉၉၉) အီရတ် ▬ ၀.၅၆၇
- (၁၉၉၈) မာရှယ်အိုင်းလန်း ▬ ၀.၅၆၃
- (၁၉၉၈) ကီရီဘတ်စ် ▬ ၀.၅၁၅
- (၁၉၉၃) လိုက်ဘေးရီးယား ▬ ၀.၃၁၁
- (၁၉၉၃) အာဖဂန်နစ္စတန် ▬ ၀.၂၂၉
- (၁၉၉၃) ဆိုမာလီယာ ▬ ၀.၂၂၁
- - ဗာတီကန် မရှိ
About HDRO။ United Nations Development Program (2006)။ 28 October 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-10-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Includes data for mainland People's Republic of China; excludes Hong Kong Special Administrative Region (SAR) (separately ranked), Macau SAR and the Republic of China (Taiwan).
Also known as Congo-Brazzaville and previously simply as Congo.
Also known as Congo-Kinshasa.
As the UN does not recognize the Republic of China (ROC) asastate, the HDI report does not include data for "Taiwan, Province of China" (the term used by the UN to refer to the domain of the Republic of China; see Political status of Taiwan). The ROC's government calculated its HDI as of 2005 to be 0.932 based on the following data: life expectancy of 77.4 years; adult literacy rate of 97.3%; combined gross enrollment rate of 100%; and GDP per capita (PPP) of US$28,552. If it were included in the UN's HDI figures as of 2005, the ROC would rank 23rd as same as Israel. National Statistics, R.O.C. (Taiwan) (in Chinese)။ Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. (2006)။ 2008-02-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The UN did not calculate the HDI of Macau. The government of Macau calculates its own HDI as of 2004 as 0.909. If it were included in the UN's HDI figures as of 2004, Macau would rank 25th (behind Greece and in front of Singapore). 2006 Macao in Figures (in English)။ Statistics and Census Service, Macau SAR (2006)။ 2006-11-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Institute for Strategic Studies and Prognoses (ISSP), in Podgorica, issuedastudy on Montenegro in collaboration with the UNDP. Human development report for Montenegro။
The HDI of Serbia was not calculated by UNDP. 2007/2008 Report Serbia and Montenegro။ 1 August 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
This list includes territories located wholly in Europe, including Belarus (which is notamember of the Council of Europe). This list does not include Asian members of the council of Europe, e.g. Armenia, nor transcontinental territories - located partly in Asia, e.g. Kazakhstan (which is notamember of the Council of Europe), Azerbaijan, Georgia, Russian Federation, and Turkey (members of the Council of Europe).
Human Development Report 2007/2008။ United Nations Development Program (2007)။ 2007-11-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။